VaBiti Vanoti Nyika Inoda US$200m Kuti Sarudzo Dziitwe Gore Rinouya
Gunyana 01, 2010
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vanoti nyika inoda mari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica kuitira kuti ikwanise kuita sarudzo gore rinouya.
VaBiti vanoti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzinoda zana remamiriyoni emadhora, ukuwo sarudzo dzenhengo dzematare maviri eparamende dzichidawo rimwe zana remamiriyoni emadhora.
VaBiti vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare neChipiri mukugadzirira kwavo hurongwa hwemashandisirwo emari nehurumende gore rinouya. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, ZEC, VaSimpson Mutambanengwe, vakati komisheni yavo haina mari yayati yapihwa yekuti vatange kuronga sarudzo kana vachinge vaudzwa kuita izvi nehurumende.
Asi vakatiwo havana simba rekuti sarudzo dzingaitwe riini sezvo izvi zviri mumaoko evatungamiri veZanu-PF neMDC vari muhurumende yemubatanidzwa. Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vakabuda pachena kuti sarudzo dzichaitwa gore rinouya kana munyika mava nebumbiro idzva.
Izvi zvakatsigirwawo nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, avo vanotiwo vakagadzirira nebato ravo kupinda musarudzo gore rinouya.
Asi mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vanoti nyika haina kugadzirira kuita sarudzo gore rinouya. Vanotiwo vari kufunga kuita sarudzo idzi, vari kuita maroto.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti VaMutambara havadi sarudzo nokuti vanoziva kuti dzikaitwa, ndiko kunobva kwava kupera kwebasa ravo muhurumende.
Sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network, kana kuti ZESN, VaTinovaziva Bere, vanoti nyika haina kugadzirira zvakakwana kuita sarudzo panguva ino, nekudaro hapana chekumhanyira sezvo vanhu vachizoguma voburitsirana makano.